सबैको चर्को बिरोधपछि सोफा छोड्न बाध्य भए ओली-प्रचण्ड, भीम राववले भने MCC कुनै हालतमा पास गर्न हुन्न ?…हेर्नुहोस| – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सबैको चर्को बिरोधपछि सोफा छोड्न बाध्य भए ओली-प्रचण्ड, भीम राववले भने MCC कुनै हालतमा पास गर्न हुन्न ?…हेर्नुहोस|
काठमाडौँ – सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले वि,रोध गरेपछि दुई अध्यक्षका लागि राखिएको सोफा हटाइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्नका लागि मञ्चमा सोफा राखिएको थियो । अन्य नेताहरुका लागि कुर्सीको व्यवस्था थियो ।
दोस्रो दिनको बैठकमा नेता भीम राववले बैठक कक्षको मञ्चमा दुई अध्यक्षका लागि छुट्टै सोफा किन राखेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । नेता रावलले क,म्युनिष्ट पार्टीको बै,ठकमा कुर्सीमै असमानता किन भनेर प्रश्न गरेका थिए । यो सामन्तवा,दी प्रवृति भएको भन्दै उनले हटाउन माग गरे । उनले सोफा हटाउन माग गर्दा सबैले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए।
त्यसलगत्तै अध्यक्षद्वयका लागि मञ्चमा राखिएका सोफा हटाईएको एक नेताले जानकारी दिए । त्यसपछि अन्य सदस्यलाई जस्तै अध्यक्षका लागि कुर्सीको व्यवस्था त्यहाँ भएको थियो ।
बुधबार बैठक सुरुवातका दिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दुई अध्यक्षभन्दा पछि राखेको भन्दै कार्यालय सचिवलाई आफू बस्ने कुर्सी अगाडि सार्न लगाएका थिए । शुक्रबारबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित थिएनन् । नेकपाको माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि नेताहरुले वि,रोध गरेपछि मन्ञ भित्तामा टाँसिएका दुई अध्यक्षका तस्बिर बैठकको बीचमै हटाएका थिए ।
६ महिनापछि बसेको स्थायी कमिटी बै,ठकलाई उपेक्षा गरेकोमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आ,लोचना भएको छ । बुधबारबाट सुरु भएको बैठकमा शुक्रबार एजेन्डामाथि धारणा राख्ने क्रममा स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएकोमा आ,लोचना गरेका हुन् ।
नेपालको सी,मा स,मस्या र स,माधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र एमसिसीजस्ता राष्ट्रिय एवं पार्टी जीवनका दी,र्घकालीन महत्वका एजेन्डा केन्द्रित छलफल हुने दिन पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएकोमा सदस्यहरुको असन्तुष्टि थियो ।
स्थायी कमिटी सदस्यहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुवीर महासेठ, लिलामणि पाखेरल, भीम रावल, पम्फा भुसाललगायतका नेताहरुले बैठकमा प्रधामन्त्री ओली किन उपस्थित नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । नेता शाक्यले प्रधानमन्त्री बिना बैठक खल्लो भएको भन्दै बैठक राख्नै नमान्ने राखेपछि भागेर हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले यसरी पार नलाग्ने बताएकी थिईन् । शाक्यले बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै यो बैठक धुम्बाराहीमा राख्नुपर्ने माग गरकी थिइन् ।
नेता रावलले ‘प्रधानमन्त्री किन नआएको ? पछि आ,लोचना गर्‍यो भने सरकारको वि,रोध भयो भन्ने ?’भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेता महासेठले प्रधानमन्त्री बीना छलफलको के औचित्य भन्दै प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर कुरा राखेका थिए ।
अधिकांश सदस्यहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री किन अनुपस्थित भन्ने प्रश्न गरेपछि महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यव्यस्तताका कारण अनुपस्थित भएको र कुनै पनि बेला उपस्थित हुने बताएका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले बैठक सुरु गरेका थिए । बैठकको सुरुको दिन सात एजेन्डामध्ये दुई अध्यक्षको सम्बोधन पनि थियो । त्यसैअनुसार बुधबार सम्बोधन गरेका ओली शुक्रबार बालुवाटारमै भएर बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् । यसैलाई लिएर नेताहरुले बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए र आ,पत्ति जनाएका थिए ।
शुक्रबारको बैठकमा सदस्यले नेपालको सी,मा स,मस्या र समाधान केन्द्रित भएर बोलेका छन् । बैठकमा १८ स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आफ्ना धा,रणा राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
बुधबारको बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालका फरक–फरक धारणा आएका थिए । सरकारको काम प्रभावकारी भएको प्रधानमन्त्रीको दा,वीमा वरिष्ठ नेता नेपालले आ,पत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि बसेको बैठकमा ओली अनुपस्थित भएका हुन् । बैठकका लागि सात एजेन्डा तय भएका छन् ।
बैठक व्यवस्थित बनाउन बिहीबार अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तथा अध्यक्ष दाहाल र बरिष्ठ नेता नेपालबीच छलफल भएको थियो । दुवै बैठकमा पार्टी महासचिव पौडेल सहभागी थिए । बिहीबारको यो संवादपछि शुक्रबार बैठक अगाडि पनि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच भेट भएको थियो । सरकारको राम्रो कामको पार्टी नेताहरुले बचाउ र प्रचार नगरेको प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको गुनासो छ ।
बैठकको दोस्रो दिन भारतसँगको सी,मा वि,वादमा केन्द्रीत भएर छलफल भएको छ । बैठकमा नेपालको सी,मा स,मस्या सुल्झाउन भएका रा,जनीतिक एवं कु,टनीतिक प्रयासबारे सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी गराएका थिए । ज्ञवालीबाहेक अन्य सदस्यले भारतसँगको सीमा वि,वाद समाधानका लागि विभिन्न सु,झाव दिएका छन् ।
‘भारतसँगको सी,मासँग सम्बन्धित मु,द्दाहरुबारे छलफल भयो । यो छलफलमा १८ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आफ्नो विचार राख्नु भयो,बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘भारतद्वारा अ,तिक्रमित भूमि समेटेर सरकारले नक्सा जारी गर्नु सकारात्मक काम भएको र अब कुटनीतिक संवादबाट नै नेपालको अ,तिक्रमित भूमि प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने सबै साथिहरुको जोड थियो ।
Previous कोठामा सुतिरहेका बेला घरको छत ख स्यो, परिवारै स’खाप…
Next नेपालमा यस्ता मानिस पनि छ्न जस्लाई प्रधानमन्त्री ज्यु बोल्न साथ ज्व,रो आउने गर्दछ : चौधरी …हेर्नुहोस|
निषेधाज्ञाको समयमा पनि सरकारी गाडीमा युवती लिएर स्वयम्भू डाँडामा डेटिङ जाने व्यक्तिको परिचय खुल्यो, आखिर को हुन्?
“ज्वाला सङ्ग्रौला,लाई थु’न्न आज अ’दालत,बाट म्याद थपिँदै,अर्को उ’जुरी पनि आज नै”
59 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता
“हिलोमा फसेको, ट्रक निकाल्नै, लाग्दा पहिरो,ले पुरियो”
“बाढीपहिरो’मा परी १८ को मृ’त्यु”
सिन्धुपाल्चोकको भि’षण बाढीले बगाएर बाँच्न सफल नारायण भन्छन् मलाई दाउरालाई जस’री बाढीले बगायो(भिडियोसहित)